अटारी - घर को अटारी, आवासीय उद्देश्यका लागि rework को जो धेरै मालिकहरू छ। को अटारी को मुख्य लाभ को अलग छ - त्यहाँ सधैं शान्त र शान्त छन्। यसलाई तपाईंले आराम, बेडरूम, नर्सरी या कार्यालय कोठा बनाउन सक्छ। यो अटारी तल्ला खत्म भित्री आवश्यक छ।
के समाप्त अघि गर्नुपर्छ
त्यो सुसज्जित कोठा, आरामदायक सुक्खा र न्यानो थिए छत जाँच गर्न पहिलो स्थानमा - त्यहाँ कुनै लिक छन्। तपाईं पनि बीम र छत को बल ध्यान गर्नुपर्छ। यो परिष्करण सामाग्री संलग्न हुने रूपमा तिनीहरूले, भोकमरी र मोल्ड र क्षय हुनु मुक्त हुनुपर्छ।
कारण चिस्यान को एक ठूलो रकम को यसको सामग्री ताजा काठ संरचना सामना लागि सिफारिस गरिएको छैन। यो अस्तर सामाग्री को विस्थापन गर्न सक्छ। पूरा भएको अटारी तल्ला पर्खालहरु र छत को इन्सुलेशन पछि बाहिर छ।
को अटारी को वार्मिंग
को अटारी तल्ला को उचित इन्सुलेशन देखि यसलाई स्थित परिसर को न्यानोपन र सान्त्वना मा निर्भर गर्दछ। पहिलो सामाग्री चिस्यान को संग्रह रोक्छ जो छत छाप तह अन्तर्गत राखिएको छ। आफ्नो काखमा राख्नु। Waterproofing विशेष संलग्न स्टेपल बन्दूक वा रेल प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि दृढ इन्सुलेशन राखे। तपाईं थाह हुनुपर्छ गर्मी-इन्सुलेट सामाग्री, धेरै पङ्क्तिहरू मा राखे, को seams मा नै हुँदैन। अटारी इन्सुलेशन लागि सबैभन्दा व्यावहारिक र उपयुक्त एक लोचदार basaltic छ खनिज ऊन, flammability गुण र soundproofing छ जो। यसबाहेक, एक वाष्प बाधा तह राखे छ। दुवै पक्षले छत sheathe काठ slats, हाइड्रो र वाष्प नियन्त्रण तहहरू र इन्सुलेशन बीच एक हावा पत्र प्रदान जो। परिष्करण सामाग्री को अन्त मा संलग्न छ।
thermally इन्सुलेट सामाग्री बिछाउने योजना निम्न तत्त्वहरू comprises:
वाष्प बाधा पत्र;
भित्री डिजाइन लागि सामाग्री।
छत खत्म फरक परिष्करण सामाग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ लागि। सबै कोठा को उचाइ मा निर्भर गर्दछ। कोठा आरामदायी थियो, यसको इष्टतम उचाइ छत, छाला काठको छेकवार वा Drywall हेर्न एक राम्रो विचार 2.1 मिटर हुनुपर्छ।। यो एउटा सुन्दर चिल्लो सतह फारम निलम्बित छत, स्थापना गर्न सम्भव पनि छ।
वार्मिंग र तल्ला finishes
तल को वार्मिंग अटारी तल्ला सम्पूर्ण क्षेत्र सामाग्री इन्सुलेट बनाइन्छ। यो खनिज वा ग्लास ऊन प्रयोग गर्न राम्रो छ। यो दृढ मुस्कराते बीच राखिएको छ। को इन्सुलेट पत्र को मोटाइ waterproofing राख्नु भन्दा जो कम्तिमा 80 मिमी हुनुपर्छ। को अखंड स्लैब को मिल्दाजुल्दा भने, तल्ला राम्रो टाई ढाक्नु छ।
प्रायजसो तल्ला बोर्डहरू को आधार एक 4-6 सेमी बाक्लो, joists मा राखे शामिल। तिनीहरूलाई बीच हावा परिसंचरण र एक खाली इन्सुलेशन सामाग्री छोड्नुहोस्। घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने संग उपचार तल्लो छेउमा, गुणस्तर, ड्राई को हुनुपर्छ तल्ला बिछाउने लागि sami बोर्ड। काठ फर्श लिनोलियम, laminate वा गलैँचा ढाकिएको गर्न सकिन्छ।
को सामना सामाग्री लागि आवश्यकताहरू
भित्री परिष्करण तल्ला अटारी अक्सर पानी प्रतिरोधी र आगो प्रतिरोधी गुण वा अन्य fireproof सामाग्री छ जो plasterboard, प्रदर्शन। एक काठ घर को अटारी तल्ला खत्म ब्लक-घर वा काठ सञ्चालन गरिएको छ भने, तिनीहरूले एक विशेष आगो-retardant संग गर्भवती गर्नुपर्छ।
को अटारी मा स्थित परिसर को व्यावहारिकता, आफ्नो भित्री अस्तर मा निर्भर गर्दछ। त्यहाँ एक अद्वितीय एक अद्वितीय भित्री सिर्जना गर्न मद्दत जो अटारी तल्ला खत्म लागि विभिन्न विकल्प छन्।
एउटा सानो अटारी भने, यो उज्यालो रंग प्यालेट, नेत्रहीन विस्तार सक्षम यसको क्षेत्र र प्यास्टेल रंग छत र पर्खाल को निकटता कोमल गर्न अनुमति मा खडा दर्ता गर्नुहोस्। को अटारी अन्तरिक्ष समाप्त गर्न, डिजाइन शैली बिना यो नै रंग को सामाग्री प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यो काठ काठको छेकवार सजाउनु यदि अटारी महान हुनेछ। यो cladding को अन्य प्रकार संग राम्रो Blends एक बहुमुखी प्राकृतिक सामाग्री छ।
को अटारी तल्ला यसरी धेरै सरल र छिटो गरे खत्म। मुख्य अवस्था - बसाई सराई को स्थापना ध्यान बाहिर र distortions बच्न बोर्ड को स्थिति को स्तर जाँच, गर्नुपर्छ। अस्तर टोपी बिना काठ crate नङ संलग्न छ। एक पटक यो जल देखि सामाग्री रक्षा हुनेछ जो वार्निश संग लेपित छ स्थापना।
को अटारी तल, जिप्सम बोर्ड बनेको खत्म, किनभने यसको कम लागत र उत्कृष्ट प्रदर्शन को धेरै लोकप्रिय छ। पर्खाल काठको छेकवार, काठ मा रूपमा Fastened वा धातु प्रोफाइल लाठ स्क्रू को गरे।
Drywall को स्थापना पूरा एकल वा डबल-पत्र चढाना हुन सक्छ। परिष्करण दुई पत्रहरु मा प्रदर्शन गरिएको छ भने, पहिलो पत्र पहिलो र त्यसपछि दोस्रो संलग्न छ। यसरी पानाहरू आफ्नो seams पहिलो र दोस्रो लाइन एकै समयमा पर्नु गर्छन् भनेर सेट छन्। को अटारी तल्ला को प्लास्टर समाप्त, लेख मा प्रस्तुत भएको एक फोटो, छैन जटिल छ, तर यो समय-खपत आवश्यक छ। स्थापना को अन्त पछि सबै जोइन्टहरूमा र स्क्रू सीट भरिएको हुनुपर्छ।
परिसर मा अटारी तल्ला उपकरण घर क्षेत्र विस्तार गर्न मद्दत गर्छ। गुणस्तर finishes प्रदर्शन पछि एक ठूलो कोठा, जो तपाईं भाडादारों 'आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गर्न सकिन्छ प्राप्त।
प्लास्टर "Teplon" - आफ्नो पर्खालहरु को alluring चमक
पन्चिङ धातु: सुविधाहरू, लाभ र आवेदन विधिहरू
पहाड Clover: विवरण र औषधीय गुण
योजना बुनाई सुई व्याख्या र notations संग tippet
कुकुर-ब्वाँसो - नस्ल को नाम?
एक diathesis मा एक बच्चाको लागि Hypoallergenic आहार
कसरी र के ह्वेल खान?
5 औं ग्रेड मा अभिभावक बैठक। शीर्षकहरू अभिभावक सभाहरूमा (ग्रेड 5)
तयारी "पोटासियम क्लोराइड"
Spathiphyllum: सुक्खा पात सुझावहरू। को बोट कसरी मदत गर्न?